Ogaden News Agency (ONA) – Golihii Wasiirada ee Dalka Sudan oo Lakala Diray.
Golihii Wasiirada ee Dalka Sudan oo Lakala Diray.
Sudan Cumar Al Bashiir, Madaxweynaha dalka ayaa Axadii lasoo dhaafay gebi ahaanba kala diray Golihiisii Wasiirada, si uu wax uga qabto xaalada dhaqaale ee dalkaasi ka jirta.
Tirada Golaha Wasiirada oo horey u ahayd 31 xubnood ayaa la sheegay in la yareyn doono oo laga dhigi doono 21 Wasiir. Xubnaha xilka laga qaaday ayey ku jiraan Raysalwasaaraha, Wasiirka Federaalka iyo Wasiir dowlayaasha.
Xaalada dhaqaale ee wadanka Sudan ayaa sii xumaaneysay sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo heerka sicir bararka dalkaasi uu gaadhay 65%. Waxaana hoos si weyn ugu dhacay qiimaha lacagta dalkaasi ee loo yaqaano ginida.
Bilowgii sanadkan ayey wadankaasi ka dhaceen banaanbaxyo ay shacabka dhigeen kadib markii uu sii kordhay qiimaha ay ku gadan jireen rootiga. Dadka danyarta ah ee dalka Sudan ayaa ku sugan heer aad u liitada iyo khatar ba’an oo lasoo daristay nolol maalmeedkooda caadiga ah.